Yaa-Marqa si afuufuun si liqimsuuf” Kanneen Fooliin Oromummaa isin irraa Urgaawu Cufaaf! Waaqoo Nooleetiin – OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATA
Yaa-Marqa si afuufuun si liqimsuuf” Kanneen Fooliin Oromummaa isin irraa Urgaawu Cufaaf! Waaqoo Nooleetiin
Walumaagalatti QBO qabsaawotaan gaggeeffamaa turtee fi jirtu galmaan geenyee Bilisummaa Oromoo fi Walabummaa Oromiyaa mirkaneesuuf fallii fi malli jiru tokkichii fi inni maayii qabsoo karaa hidhannoo finiinsuudha malee diina inikkaa keenya sooggachuu (kadhachuu) miti. Kanaaf jechaa fi gochaan diinni ittiin nu sobee nuun sossobu cufti nuuf jajee osoo hin taane nu jaji’ uuf akka ta’e hubachuun barbaachisaa qofa osoo hin taane murteessaadha. Egaa anis kanumaafan “yaa marqa si afuufuun si liqimsuuf” jedhe